4 Qaab Oo Looga Hortagi Karo Madax Xanuunka Bisha Ramadaan - Daryeel Magazine
4 Qaab Oo Looga Hortagi Karo Madax Xanuunka Bisha Ramadaan
Soonka bisha ramadaan waa waajib diineed oo sannadkiiba hal mar soo mara muslimiinta, iyada oo qofku uu soomo laga bilaabo cadceed kasoo baxa illaa cadceed ka dhaca. Oo markaas looga baahan yahay inuu muddadaas ka go’o dhamaan cabitaanka, cuntada iyo waliba waxyaabaha kale sia sigaarka.
Hadaba iyada oo bishii ramadaan aynu fooda u saaran nahay sannadkan, bishan naxariista, bishan ka kooban naxariista, dambi dhaafka iyo waliba naar ka xoraynta ayaa waxa garab yalla faaidooyin caafimaad iyo qaar jidheedba.
Inta badan dadka sooma bishani waxa soo waajaha madax xanuun fudud, dhexdhexaad ah iyo mid culusba iyada oo ay sabab u tahay sonkorta dhiiga oo hoos u dhacda, Jidhka oo waaya balwadihii uu u bartay sida maadada ku jirta shaaha ee Cafeine iyo waliba hurdada yaraanta iyo daalka la socda soonka.
Badiyaaba madax xanuunku waxa uu qofka sooman ku imaadaa waqtiyada duhurka kadib iyo waliba galinka dambe inta aanuu qofku ka afurin. waxa kale oo uu dadka ugu kala badan yahay sida markooda hore ee aanay soomanayn ugu kala badan yahay.
Hadaba sababahan hoos ku xusan kaga hortag soonka madax xanuunka la socda:
Sababta ugu horaysaa waa xaraarada shaaha ama bunka oo qofka balwad u ahayd markii hroe inuu maalintiisa dhowr mar cabo, sidaa awgeed cabitaanka koob shaaha ama bunka waqtiga suxuurta inta aanaad soonka bilaaban ayaa arinkaas aad kaga hor tagi kartaa. Waxaana wacan in aad marka hore yaraysatid balwadan si aad ramadaanta ugu baahan.
Sonkorta jidhka oo hoos u dhacda ayaa iyana kamid ah sababaha waawayn ee madax xanuunka keena soonka bisha ramadaan, ha cunin cunno sonkor badan marka aad soonka bilaabi rabtid hana cunin mid bilaa sonkor ah, isku day inaad sonkor dhexdhexaad ah cuntid.
Qallaylka (Ingaga) Waxa lagama maarmaan ah inuu qofku cabo dareere ku filan (Maraq, biyo ama sharaab) inta aanuu soonka bilaaban waqtiga suxuurta iyo waqtiga afurka. Arinkani ayaa waxa uu ka hor tagaa madax xanuun iyo waliba xaalado kali sida indha madoobaad iyo suuxdin ba.
Joojinta sigaarka ayaa isaguna keena mada xanuunka bisha ramadaan, balse waa maalmaha hore oo kaliya.
Cida ka cabanaysa madax xanuunka ayaa waxay tahay inay ka dheeraadaan waxyaabaha ay kamid yihiin hurdo yaraanta iyo hawsha badan. Inuu qofku raaxaysto waqti ku filan ayaa gacan wayn ka qaadata ka hor taga madax xanuunka bishan ramadaan.
Gaajadu waxa ay ka mid tahay waxyaabaha keena madax xanuunka bishan ramadaan, waxaana iyada lagaga hor tagaa cunida cunno awood badan oo jidhka ku jirta muddo dheer.
Talooyin Ku Socda Gabadha Oo Ay Kaga Faaidaysan Karto Bisha Ramadaan
Sababaha Keena Bidaarta Iyo Hababka Looga Hortagi Karo
Isu-naxariisashada iyo Saamaynta Wanaagsan ee ay ku Leedahay Bulshada
Dhamaanba diimihii samaawiga ahaa ee Allah swc soo dajiyay waxay ahaayeen kuwo kubaaqa oo iskuraacsan …